Barashada Wasaaradda Deegaanka iyo Qorshaynta Meelaha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | General, Deegaanka
Junta de Andalucía waa hay'ad ay si iskiis ah u maamusho is-maamulka ismaamulka Beesha. Waxay ka kooban tahay baarlamaanka Andalus, Madaxweynaha Guddiga iyo Golaha Maamulka.
La Maamulka Junta de Andalucía waxaa lagu abaabulaa Kulliyadaha soo socda:
Golaha Madaxtooyada iyo Maamulka Deegaanka.
Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Aqoonta.
Wasaaradda Maaliyadda iyo Maamulka.
La talinta caafimaadka.
Golaha Sinnaanta iyo Siyaasadaha Bulshada.
Wasaaradda shaqada, ganacsiga iyo ganacsiga.
Wasaaradda Hormarinta iyo Guriyeynta.
Wasaaradda Dalxiiska iyo Ciyaaraha.
Wasaaradda Cadaaladda iyo Arimaha Gudaha.
Wasaaradda Deegaanka iyo Qorshaynta Meelaha.
Qormadan waxaan diiradda ku saari doonnaa tan dambe si aad si fiican ugu ogaatid.
Marka ugu horeysa waa in la ogaado in Wasaaradani ay leedahay awoodaha ismaamulka bulshada ee arrimaha deegaanka, biyaha, qorshaynta dhulka iyo xeebta iyo qorshaynta magaalooyinka.
Aagagga waxqabadka waxaa ka mid ah biyaha, tayada deegaanka, ugaadhsiga iyo kalluumeysiga, cimilada iyo isbeddelka cimilada, waxbarashada deegaanka iyo iskaa wax u qabso, aagagga la ilaaliyo, dabka kaynta, deegaanka dabiiciga ah, iyo qorsheynta iyo maaraynta magaalooyinka.
1 Hawlaha iyo awoodaha
2 Qaab dhismeedka ururka
2.1 Hay'adaha Maamulka Dhexe
2.1.1 Wasaaradda ku-xigeenka
2.1.2 Xoghaynta Guud ee Qorshaynta Meelaha iyo Joogtaynta Magaalooyinka
2.1.3 Xoghaynta guud ee deegaanka iyo isbadalka cimilada
2.1.4 Xoghaynta Guud ee Farsamada
2.2 Hay'adaha gacansaarka la leh
2.2.1 Wakaalada Deegaanka iyo Biyaha (AMAYA)
2.2.2 Aasaaska Horumarinta Joogtada ah ee Doñana iyo Deegaanka-Doñana 21
2.3 Hay'adaha uruurinta
2.3.1 Golaha Andalus ee deegaanka
2.3.2 Golaha kala duwanaanta kaladuwan ee Andalus
2.3.3 Golaha Biyaha ee Andalus
2.3.4 Golaha Andalusiyaanka ee Qorsheynta Meelaha iyo Magaaleynta
2.3.5 Guddiyada Territoriga ah ee Qorshaynta Meelaha iyo Qorshaynta Magaalooyinka
2.3.6 Booqashada Territorial-ka ee Andalus
2.3.7 Guddiyada Isuduwidda Magaalooyinka Gobollada
Hawlaha iyo awoodaha
Si kastaba ha noqotee, gobol kasta Wasaaraduhu waxay ku shaqeeyaan iyada oo loo marayo Wufuudda Dhulka ee leh kuwa soo socda shaqooyinka iyo awoodaha baaxadda gobolkaaga:
Matalaadda caadiga ah ee Waaxyada adeegyadooda durugsan ay ku xiran yihiin Ergada Territorial, iyo meeshii ay ku habboon tahay, ee ka socda hay'adaha ku xiran ama ku tiirsan Waaxaha.
Toos, iyadoo ku hoos tiirsanaanta waxqabadka ee xarumaha maamulka u dhigma, qaybaha maamulka ee ka tirsan Ergada.
Layli hoggaanka dhammaan shaqaalaha Ergada iyo maamulka caadiga ah iyo awoodaha maamul ee isku mid ah ee si cad loogu wakiishay iyaga.
Sameynta marinka caadiga ah ee xiriirka lala yeelanayo adeegyada dhexe ee Wasaaradaha adeegyadooda durugsan ay ku xiran yihiin Ergada Territoria, iyadoo aan loo aabo yeelin awoodaha loo aaneeyo madaxyada Wafuudda Dowladda ee Junta de Andalucía, iyo qeybaha guud ee guud. Maamulka Gobolka iyo hay'adaha maxalliga ah ee Andalus ee arrimaha ku saabsan aqoontooda.
U wareejinta amarrada iyo tilmaamaha arrimaha ku saabsan awooddeeda illaa iyo madaxyada Xoghaynta Guud ee Gobollada ee wasaaradaha adeegyadooda durugsan ay ku lifaaqan yihiin Ergada Territoriga.
Ku-adeegsiga awoodaha maamulka iyada oo la tixraacayo awoodahaas loo aaneeyey iyaga iyo, halka ay ku habboon tahay, marka loo eego awoodahaas adeegyada durugsan ee ay ku lifaaqan yihiin.
Marka lagu daro shaqooyinka kale ee loo aaneeyo, baahinta ama loo igmado iyaga.
Qaab dhismeedka dabiiciga ah ee Wasaaradda Deegaanka iyo Qorshaynta Meelaha waxaa aasaasay Wareegtada 216/2015, ee July 14, taas oo cadeyneysa in awoodaha aan kor ku soo xusnay ay u dhigmaan Wasaaradda la yiri.
Sidoo kale, Wareegtadan ayaa nidaamineysa ficillada Wasaaraddan iyadoo loo marayo hay'adaha maareynta dhexe, hay'adaha iyo hay'adaha ururinta ku xiran.
Xilligan, Wasiirka Deegaanka iyo Qorshaynta Meelaha waa José Fiscal López.
Hay'adaha Maamulka Dhexe
Madaxa Wasaaradda wuxuu hayaa matalaad isku mid ah wuxuuna fuliyaa jihada sare, dadaalka, isku-dubbaridka, kormeerka iyo qiimeynta howlaheeda.
Si loo helo taageero deg deg ah isla markaana loo caawiyo madaxa Wasaaradda waxaa jira Gole Wasiiro oo ay ka kooban yihiin go'aammo gaar ah.
Hay'adaha Maamulka Dhexe ee ka kooban Wasaaradda Deegaanka waa:
Wuxuu adeegsadaa hoggaanka sare ee Golaha iyo matalaadda caadiga ah ee isku midka ah ka dib markii uu haysto, taasoo u dhiganta isaga weftiga guud ee tan.
Xoghaynta Guud ee Qorshaynta Meelaha iyo Joogtaynta Magaalooyinka
Wuxuu leeyahay darajada Wasaaradda-ku-xigeenka, wuxuu mas'uul ka yahay jihaynta, isku dubaridka iyo xakamaynta howlaha Agaasinka Guud ee Magaalada. Waxay mas'uul ka tahay kor u qaadista iyo isku dubaridka gaaritaanka ujeeddooyinka iyo fulinta ficillada la xiriira arrimaha kartida leh.
Xoghaynta guud ee deegaanka iyo isbadalka cimilada
Sidoo kale, waxay leedahay darajada Wasaaradda-Ku-Xigeenka. Waxaa loo aaneeyey jihada, isku dubaridka iyo xakamaynta howlaha hay'adaha maamulka dhexe ee soo socda:
Agaasinka Guud ee Maareynta Deegaanka Dabiiciga ah iyo Goobaha la ilaaliyo.
Agaasinka Guud ee Kahortagga iyo Tayada Deegaanka.
Agaasinka Guud ee Qorshaynta iyo Maareynta Hay'adda Dadweynaha ee Haydarooliga.
Agaasinka guud ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo ka faa'ideysiga biyaha.
Xoghaynta Guud ee Farsamada
Waxay leedahay karti gaar ah oo la xiriirta soo saarista xeerarka iyo kaalmada sharciga, ee la xiriirta hidaha, ilaha aadanaha, maamulka dhaqaalaha iyo maareynta iyo qandaraasyada, iyo weliba howlaha kale.
Hay'adaha gacansaarka la leh
Wakaalada Deegaanka iyo Biyaha waxay kuxirantahay wasaarada deegaanka iyo qorshaynta meelaha. (AMAYA) iyo aasaaska horumarka waara ee Doñana iyo Deegaanka-Doñana 21.
Wakaalada Deegaanka iyo Biyaha (AMAYA)
Tani waa a wakaaladda ganacsiga dadweynaha iyo hay'ad qalab kaas oo bixiya adeegyo muhiim ah aagga deegaanka iyo biyaha Andalusia, gaar ahaan xaaladaha degdegga ah ee lagu dhawaaqay.
Hay'addu waxay horumarin kartaa waxqabadyo ka baxsan xadka Andalus fulinta barnaamijyada iyo heshiisyada iskaashi ee uu saxiixay Maamulka Junta de Andalucía.
Ujeeddada Wakaaladdu waa in ay fuliso, iyada lafteeda ama iyada oo loo marayo hay'adaha dawliga ah ama kuwa gaarka loo leeyahay ee ay ka qaybqaadato, hawlaha la xiriira ilaalinta, dhowrista, dib u soo noolaynta ama hagaajinta deegaanka iyo biyaha, iyo sidoo kale waxqabad kasta oo kale oo miisaaniyad loo qoondeeyey. , dhammaystir, horumar ama cawaaqibyada aan soo sheegnay.
Aasaaska Horumarinta Joogtada ah ee Doñana iyo Deegaanka-Doñana 21
Doñana 21 waa aasaaska qaybta dadweynaha ee Andalusiya ee u dhaqanta sida wakaalada horumarinta degmada, iyada oo la adeegsanayo xirfadda halbeegga u ah maaraynta ilaha qiimaha leh ee dhulka Doñana.
Wuxuu ku dhashay saameynta Waxaan Qorshaha Horumarinta Joogtada ah ee Doñana waxayna ku xiran tahay maxmiyadda Junta de Andalucía.
Hay'adda maamulka aasaaska waa guddiga wakiilka, kaas oo ay ku matalaan maamulka dhexe iyo kan iskiis, 14-ka gole-magaalo ee Gobolka, ururada shaqaalaha iyo hay'adaha maaliyadeed ee kala duwan.
Mu'asasada Doñana 21 waxay damacsan tahay inay ka dhigto fulinta mashaariic la taaban karo oo la taaban karo oo xaqiiqo ah oo u oggolaanaysa horumarka dhaqan-dhaqaale ee waara ee degmooyinka Doñana Region, iyadoo leh ujeedo laba-geesood ah:
Tallaabooyinka dadweynaha iyo kuwa gaarka ah ee loogu talagalay horumarka dhaqan-dhaqaale ee Gobolka Doñana.
Kaqeybgalka bulshada si loo gaaro isku xirnaanshaha dhulka, horumarka iyo dhowrista Doñana.
Guud ahaan waxaa jira qaar 7 hay'adood oo ururo urursan ku socota Wasaaradda Deegaanka iyo Qorshaynta Meelaha waana kuwan:
Golaha Andalus ee deegaanka
Waxaa loo abuuray inay tahay hay'ad kaqeybgal bulsheed oo awood u leh inay dhexgasho oo ay dhiirrigeliso kaqeybgalka bulshada kaladuwan ee daneeya arrimaha deegaanka ee Bulshadeena.
Golaha kala duwanaanta kaladuwan ee Andalus
Waa hay'ad wadatashi oo talo iyo kormeer ah oo dhiirrigelisa kaqeybgalka la xiriirta ilaalinta iyo ilaalinta deegaanka dabiiciga ah.
Ku milmaan Golayaashii hore ee dhirta iyo ugaadhsiga.
Golaha Biyaha ee Andalus
Waa hay'ad uruurisa wadatashiga iyo talo bixinta Dowlada Andalus ee arrimaha biyaha. Qaab dhismeedkeeda iyo hawlgalkeedaba waxaa lagu xakumay Wareegtada 477/2015, ee Noofambar 17.
Golaha Andalusiyaanka ee Qorsheynta Meelaha iyo Magaaleynta
Waa hay'ad wada jir ah oo wadatashi iyo ka qaybqaadasho leh. Waxaa lagu nidaamiyaa Wareegtada 36/2014, ee bisha Febraayo 14, oo dejisa awooda Maamulka Junta de Andalucía ee arrimaha Qorsheynta Baaxada iyo Qorsheynta Magaalada.
Guddiyada Territoriga ah ee Qorshaynta Meelaha iyo Qorshaynta Magaalooyinka
Waa hay'ad uruurisa heer gobol oo wadatashi iyo go'aan qaadasho leh. Waxaa lagu nidaamiyaa Wareegtada 36/2014, ee Febraayo 11.
Booqashada Territorial-ka ee Andalus
Waa dabeecad la talin ah oo ku saabsan arrimaha qorsheynta dhulka. Astaamaheeda waa kormeerka, qiimeynta iyo himilada dhulka Andalus iyo qorshayntiisa, horumarkiisa iyo isbeddelkiisa, iyo sidoo kale saameynta ay ku leeyihiin siyaasadaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Guddiyada Isuduwidda Magaalooyinka Gobollada
Waxay yihiin ururo uruurineed oo dabeecad goboleed leh, oo leh hawlo isuduwe. Guddigan wuxuu mas'uul ka yahay helitaanka codsiyada warbixinnada, fikradaha ama noocyo kale oo dhawaaq ah oo ay tahay inay soo saaraan hay'adaha awoodda u leh iyo hay'adaha Maamulka ee Junta de Andalucía qalabka qorshaynta guud iyo hal-abuurnimadooda saamaynta ku leh maaraynta qaabdhismeedka, sidoo kale sida u gudbintooda Maamulka karti u leh ka shaqeynta qorshaynta la sheegay.
cunt madaxbanaanida 7daas hay'adood oo urursan hore loo soo sheegay, Wareegtada 477/2015, ee Noofambar 17, oo nidaamisa Hay'adaha Ururada ee Maamulka iyo Kaqeybgalka Bulshada ee Maamulka Biyaha Andalus ayaa lagu qeexay qodobka 8 in ururada uruurinta ee kaqaybgalka maamulka iyo bulshada ee dabeecadda go'aan qaadashada, la taliyayaasha, xakamaynta, maaraynta iyo isku dubaridka Maamulka Biyaha Andalusiya waa kuwan soo socda:
Golaha Biyaha ee Andalusiya ayaa markale lagu soo daray.
Komishanka Maamulka Kartida leh.
Gudiga dabagalka ee ka hortaga fatahaadaha magaalooyinka.
Golayaasha Biyaha ee Soohdimaha Biyoodka.
Guddiyada Maareynta Abaaraha.
Golaha joogtada ah.
Komishanka Ka-faa'iideysiga wareejinta Guadiario-Guadalete.
Qaab aad loo soo koobay, kani waa abaabulka Wasaaradda Deegaanka iyo Qorshaynta Baaxadda, waxaan rajaynayaa in akhrisku aanu kugu cuslaanin maxaa yeelay dabcan maahan wax lagu farxo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Ogaanshaha Wasaaradda Deegaanka iyo Qorshaynta Meelaha
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kuleyliyaha gaaska dabiiciga ah